Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် - Zhuji Feihu ချည်မျှင်စက် Co. ,, Ltd မှ
Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် 2010 ပလက်ဖောင်း ဗွီဒီယိုဂိမ်း ကတီထွင် ကောင်းသော-စိတ် နှင့် HAL ဓာတ်ခွဲခန်း နှင့်ထုတ်ဝေသော ကို Nintendo အတွက် wii ဗီဒီယိုဂိမ်း console က. ဒါဟာ၏ဒသမအရစ်ကျဖြစ်ပါသည် Kirbyဗွီဒီယိုဂိမ်း စီးရီးနှင့်အောက်တိုဘာလများတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2010 ဂျပန်နှင့်မြောက်အမေရိကနှင့်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း 2011 သြစတြေးလျနှင့်ဥရောပထဲမှာ. ဒါဟာပထမဦးဆုံး entry ကိုဖြစ်ပါတယ် Kirby 2003 ကတည်းကတစ်အိမ်မှာ console ကိုအပေါ်စီးရီး \_ 'sKirby Air ကိုစီးနင် နှင့်၎င်း၏ပထမဦးဆုံးအိမ်ပြန် console ကိုပလက်ဖောင်းဂိမ်း 2000 \_ 's ကတည်းက Kirby 64: အဆိုပါ Crystal Shards.
အဆိုပါဂိမ်းအောက်ပါအတိုင်း Kirby, ကြိုးအသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် Patch မြေထံသို့စေလွှတ်ထားပြီးခဲ့သူ, ကမ္ဘာထည်ထဲကလုံးဝလုပ်. သူကရန် 's \_ ဂိမ်းကိုရပ်တန့်နိုင်ဖို့အတွက်အတူတကွ Patch မြေယာတွေချုပ်ဖို့အသုံးပြုကြသည်မှော်ကြိုးခုနစ်လုံးကိုအပိုင်းပိုင်းစုဆောင်းခြင်းဖြင့်မင်းသား Fluff ကိုကူညီရမယ်, ယဉ်ချည်ခင်။ Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် တစ်မူထူးခြားသောယာဉ်-based အမြင်အာရုံစတိုင်အသုံးချ; ဂိမ်း \_ 's ဇာတ်ကောင်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကြိုး၏လုံးဝထားရှိရေး, အထည်အလိပ်, နှင့်အခြားယာဉ်ပစ္စည်းများ. ထဲမှာအများဆုံးဂိမ်းမတူဘဲ Kirby စီးရီး, Kirby ရှူသို့မဟုတ်ပျံသန်းနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်, အစားအခြားအအရာဝတ္ထုသို့ morph နိုင်စွမ်းအပေါ်မှီခို, ထိုကဲ့သို့သောလေထီးအဖြစ်, ကားတစ်စင်း, နှင့်တစ်ဦးရေငုပ်သင်္ဘော, အဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအကြံပေးအဖွဲ့နှင့်ရေနွေးငွေ့ရထားအဖြစ်ပိုကြီးတဲ့အရာဝတ္ထု.
ကို Nintendo နှင့်အတူတွဲဖက်အတွက်ကောင်းမွန်သော-စိတ်ကတီထွင်တတိယဂိမ်း, Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် မူလက Madoka Yamauchi တို့ကအဆိုပြုထားခဲ့သည်, သူတစ်ဦး၏အိုင်ဒီယာနှင့်အတူတက် လာ. "ကြိုးကမ္ဘာ" ဗီဒီယိုဂိမ်းအဖြစ်. ဒါဟာအဖြစ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးစတင် "Keito မျှ Fluff", အဓိကဇာတ်ကောင်အဖြစ်မင်းသား Fluff သရုပ်ဆောင်ဂိမ်းတစ်ခု, အဆိုပါသရုပ်ဆောင်ဇာတ်ကောင်နောက်ဆုံးမှာ Kirby မှ switched ခင်. အဆိုပါဂိမ်း \_ 's သော graphical စတိုင်အနားကျော်ထားရှိခဲ့ကြသည်ရသောစစ်မှန်သောဘဝပိတ်ထည်၏ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ပုံများကိုမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့. အဆိုပါဂိမ်း \_ 's ဂီတ Tomoya Tomita တို့ကရေးစပ်ခဲ့သည်.
ဂိမ်း \_ 's လွှတ်ပေးရန်ခင်မှာ, Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် မှာမြောက်မြားစွာဆုအနိုင်ရ E3 2010 အပါအဝင် အဆိုပါ Show ကို၏ဂိမ်း မှ GameSpot. ဒါဟာအကြီးအကျယ်အပြုသဘောသုံးသပ်ချက်များကိုပြန်လည်အဲဒီနှစ်အကြာတွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည်, တစ်ဦးထံမှ Editor ကို \_ 's ရွေးချယ်မှုဆုလက်ခံရရှိ IGN, အဘယ်သူသည်အဖြစ်ကအဆင့် #95 သူတို့ရဲ့အတွက် "ထိပ်တန်း 100 ခေတ်သစ်အားကစားပြိုင်ပွဲ". ဧပြီလ၏အဖြစ် 2011, ကရောင်းချပြီ 1.59 ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသန်းမိတ္တူ. ဒါဟာမှတဆင့်ဒီဂျစ်တယ် re-ဖြန့်ချိခဲ့သည် Wii U အဲ့မေလအပေါ်ဥရောပနှင့်သြစတြေးလျအတွက် 21, 2015, မြောက်အမေရိကဇူလိုင်လအပေါ် 28, 2016, နှင့်ဂျပန်နိုင်ငံများတွင်သြဂုတ်လအပေါ် 9, 2016. မှတစ်ဦးကဝိညာဉ်ရေးရာကိုဆက်ခံ Kirby \_ 's Epic ချည်ခင် ခေါင်းစဉ် Yoshi \_ 's Woolly ကမ္ဘာ့ဖလား အတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည် 2015 အတွက် Wii U.
လွန်ခဲ့သော : ဟောင်ကောင် Feeling
နောက်တစ်ခု : thread အလေးချိန်ဇယား